YEYINTNGE(CANADA): Friday, February 24
စာရင်းစစ် တွေ ကို ဘယ် ထမင်း ဆိုင် မှာ မှ ထမင်း လိုက် စား ခွင့် မပြု
အင်း ၊ ဒီရာသီ က တော့ နိုင်ငံတော် စာရင်းစစ် တို့ ရဲ့ ရာသီခွင်ပေါ့ ခင်ဗျာ ၊ ခွင် က တော့
အတော် တဲ့ သမို့ ၊ စန်း ရော စုတ် ရော ၊ လာဘ် ရော ၊ ဒလဟော ဝင် တဲ့ ရာ သီ ခွင် မျိုး ပေါ့
ခင်ဗျာ ၊ ကပ် စတမ် တို့ ၊ အ ရင် က ထောက် လှမ်းရေး အဖွဲ့ တွေ မှာ တော့ ၊ နာမည် ပျက်
စာရင်း ပေါက် ပြီးသား လူ တွေ ဖြစ် ပေ မဲ့ ၊ မျက် မှန် ကြီး တ ဝင်း ဝင်း နဲ့ ၊ စာရင်း စစ် မမ
အက်စ် အေ ၊ ( စီ နီ ယာ အော် ဒစ်တာ ) တွေ က တော့ ခွင် တွေ အတော် မိ လှ သပေါ့ ဗျာ။
အရင် ခေတ် တွေ တုံး က တော့ ၊ စာ ရင်း စစ် ဆို တာ ၊ တနှစ် မှ တခါ ပေါ့ ဗျာ ၊ တခါ တလေ
သူ တို့ မေ့ နေ ရင် ၊ ၃ နှစ် ပေါင်း မှ တခါ စစ် ကြ တာ ပါ။ သူတို့ မအား လို့ မ စစ် တာ ရှိ
သလို ၊ အဲ ဒီ ရုံး က လူ တွေ ၊ စာ ရင်း တွေ မေ့ လောက် တဲ့ အချိန် ကျ မှ ပြူး တူး ပြဲ တဲ
စာရင်း ဝင် စစ် ကြ တာ မျိုး လဲ ရှိ ကြ ပါ တယ် ၊ စာ ရင်း စစ် တွေ က အတောင်း အရမ်း က
လဲ ကြမ်း ကြ သကိုး ဗျ ၊ တကယ် ပါ ၊ လိုင် စင် ရ ၊ သူ တောင်း စား အကြီး စား တွေ လို ပါ။
ရောက် လာ တာ နဲ့ နှစ် ချုပ် စာ ရင်း အရင် စ ကြည့် ပါ တယ် ၊ အဲ ဒီ ရုံး မှာ ဘတ် ဂျက် ပေး
ထား တာ နဲ နဲ များ တာ တွေ့  တာ နဲ့ ၊ အေ ဒီ ဆို တဲ့ လက် ထောက် ညွှန် မှူး မိန်းမ ဝ ဝ ကြီး
ရောက် လာ ပါ တယ် ၊ သူ က တော့ ရောက် တာ နဲ့ အဝင် ကြေး လက် ဆောင် စ တောင်း တော့
တာ ပါ ဘဲ ၊ စက်ကူ အိတ် က လေး ထဲ ကော် နဲ့ ပိတ် ပြီး ၊ အ ဝင် ကြေး စ ပေး ရ တော့ တာ ပါ
ဘဲ ။ သူ့ ကို ပေး ပြီး ရင် ၊ ပြီး ပ လား မအောင်း မေ့ နဲ့ ၊ နောက် နေ့ ကျ တော့ သူ ထက် ဝ တဲ့
မိန်း မ ကြီး ( ဒီ ဒီ ) ဆို တာ ကြီး ကို ၊ ခေါ် လာ ပြန် ပါ တယ်။
အဲ ဒီ မိန်း မကြီး က ပို ဆိုး ပါ တယ် ၊ ပို လဲ ဝ ပါ တယ် ၊ ဒီ မိန်း မ ကြီး က သူ့ အတွက်
တင် မက ပါ ဘူး ၊ ရုံး မှာ ကျန် ခဲ့ တဲ့ ညွှန်မှူး ( တိုင်းဦးစီး ) ဆို တာ အတွက် ပါ ၊ တ ပါ
တည်း ဆက် ကြေး တောင်း တော့ တာ ပါဘဲ ။ ဘတ်ဂျက် ထဲ ကက်ပီတယ် ဘတ်ဂျက် ၊
ငွေ လုံး ငွေ ရင်း စာရင်း ပါ နေတာ တွေ့ ရင် ၊ မျက် နှာ ကို ပြုံး
နေတာ ပါ ဘဲ ၊ အကြောင်း အမျိုး မျိုး ပြ ပြီး ရစ် တော့ ပါ တ် တော့ တာပါ ဘဲ။
စာ ရင်း စစ် လာ ပီ ဆို ရင် ‘ဒီ ကက်ပီတယ် ဘတ်ဂျက် ကို ကန် ထရိုက် ရ ထား တဲ့ လူ တွေ
ပြာ တော့ တာ ပါ ဘဲ ၊ ဘယ်လောက် ဝေး ဝေး ၊ အဲ ယားကွန်း ပါ တဲ့ ကား စီး လုံး ငှား ပြီး
အကြို အပို့ လုပ် ပေး ရ ပါ တယ် ၊ သူ တို့ ရုံး နဲ့ ဝေး ရင် ၊ ဟော် တယ် ရှာ ပြီး အခန်း ထား
ပေး ရ ပါ တယ် ၊ ထမင်း ချိန် ထမင်း ၊ လဘက် ရည် ချိန် ၊ လဘက် ရေ ၊ ည ဘက် ကျ ၊
ဂျင်းသုတ် လဘက် သုတ် ၊ အိပ် ယာ မဝင် ခင် ၊ ပို ကာ ဒေါင်း ချင် တယ် ဆို လို့ ၊ ရုံး က လူ
တွေ ၊ ငွေ အရှုံး ခံ ပြီး အလှည့် တိုင်း သူ တို့ အမြဲ ဒေါင်း နေ အောင် ၊ အပျင်း တော် ဖြေ ပေး
ရ ပါ သေး တယ် ခင် ဗျာ။
အဲ ၊ အ ကဲ တော့ ပို ကြ ပါ သဗျ၊ စာရင်းစစ် တွေ ကို ဘယ် ထမင်း ဆိုင် မှာ မှ ထမင်း လိုက်
စား ခွင့် မပြု ဘူး ဆို ပြီး၊ သူ တို့ ရုံး ချုပ် က အမိန့် ထုတ် ထား ပါ သတဲ့ ခင် ဗျ ၊
အဲ သာ က ပို ဆိုး တော့ သပေါ့ ဗျာ ၊ တခါ ထဲ ၊ စာ ရင်း စာ ရွက် ရှည် ကြီး နဲ့ ၊ ဘယ် ဆိုင် က
ဝက်သား ပေါင်း ၊ ဟို မြို့ ထိပ် က ၁၂ မျိုး ဟင်း ချို ၊ ဘယ် မြန်မာ ထမင်း ဆိုင် က ငါးဖယ် ချက်
စ သဖြင့် ကောင်းပေ့ ဆို တဲ့ ဆိုင် စာ ရင်း ရေး ပြီး မှာ တော့ တာပါ ဘဲ ၊ ပြီး မှ ရုံး မှာ ဘဲ
ထိုင်စား ပြီး ၊ အပြန် မှာ သူ တို့ အိမ် သား တွေ အတွက် ၊ ပါဆယ် က ဆွဲ သွား ပါ သေး တယ်။
ရုံးတွေ က လူ တွေ က လဲ တတ် အား သမျှ လိုက် လျော ကြ ရ ပါ တယ် ၊ မဆီ မဆိုင် စာရင်း
စစ် တွေ ကို သူတို့ မီသား စု အလိုက် ဘုရားဖူး တို့ ချောင်း သာ တို့ ၊ လက် ခုတ် ကုန်း တို့ ကို
အပမ်းဖြေ ခရီး စရိတ် စက အကုန် အကျ အကုန် ခံ ပြီး ပို့ ပေး ရ ပါ သေး သဗျာ။
‘အဲ လို စရိတ် အ ကုန် ခံ ရှင်း နိုင် တဲ့ ရုံး တွေ က တော့ ၊ တတ် နိုင် သမျှ လိုက် ညှိ လုပ် ပေး
ရ ပါ တယ် ၊ အဲ သိပ် ပြီး တရား လွန် ရစ် လာ မယ် ၊ ကိုယ် ခိုး ထား ၊ စား ထား ရ တာ က နဲနဲ
စာ ရင်း စစ် ကို ပြန် ဖို့ က များ များ ၊ ကိုယ့် အိတ် ထဲ က အဆစ် ပါ တော့ မဲ့ ကိန်း ဆို ရင်
စာ ရင်း စစ် မခံ တော့ ဘဲ ၊ ကိုယ့် ရုံး ကိုယ် ပြန် ပြီး မီး ရှို့ တာ တို့ ၊ စာရင်းစစ် ဝင် ခါ နီး
ဝါယာ ရှော့ ဖြစ် တာ တို့ ဇတ်လမ်း တွေ စ ကြ ရ ပါ တော့ တယ်။
အခု တော့ သန့် ရှင်း သော အစိုးရ ၊ ကောင်း မွန် သော အစိုး ရ ခေတ် ကြီး ရောက် လာ တော့
တနှစ် ကို စာ ရင်း စစ် က အနည်း ဆုံး ၂ ခါ ဝင် တော့ တာ ပါ ဘဲ ၊ စာ ရင်း စစ် က လဲ ပုံ စံ
အမျိုး မျိုး ပါ၊ ဌာန ဆိုင် ရာ စာရင်း စစ် ၊ တိုင်း ဒေသကြီးစာရင်း စစ် ၊ အထူး စာရင်းစစ် အဖွဲ့
နာမည် အမျိုးမျိုး မရိုး ရ အောင် မှဲ့ ထား ပေ မဲ့ ၊ မကောင်း တဲ့ အကျင့် တွေ က တော့ အတူတူ
တွေ ပါ ဘဲ ခင် ဗျာ ။ တ နှစ် တခါ စာရင်း စစ် စနစ် အစား ၊ တနှစ် ၂ ခါ ခေတ် ရောက် တော့
စာရင်း စစ် တွေ လက် ခမောင်း ထ ခတ် ကြ ပီ ပေါ့ ခင် ဗျာ။
ကောင်း ပါ တယ် ၊ ဌာ န ဆိုင် ရာ တွေ က လဲ ၊ မစို့ မပို့ ခိုး ပြီး ၊ စာ ရင်း စစ် ကို ပြန် ဖို့ နေ
ရ မဲ့ အစား ၊ အချီ ကြီး ဗြောင် ကျကျ အလွဲ သုံး စား လုပ် လိုက် တာက ပို ပြီး အဆင် ပြေ လာ
မှန်း သိ နေ ကြ ပါ တယ်။ အဲ လို အချီ ကြီး ခိုး ထား တဲ့ လူ တွေ က ၊ စာ ရင်း စစ် ကို သူ ခိုး
ထား သမျှ ၊ ပွင့် ပွင့် လင်း လင်း ပြော ပြီး ၊ ပါ ဆင်း တိတ် နဲ့ အပေး အယူ လုပ် လာ ကြ ပါ တယ်။
စာ ရင်း စစ် ဆို တာ တွေ က လဲ ၊ နိုင်ငံ တော် ငွေ သိန်း ချီ ဆုံး ရှုံး တာ က သူ တို့ အတွက်
ကိုယ် ပိုင် ပိုက် ဆံ တပြား မှ မပါ တာ ဖြစ် တော့ ၊ ကိုယ့် အိတ် ထဲ ၂ သောင်း လောက် ဝင် လာ
တာကို ဘဲ ၊ စိတ် ပို ပြီး ဝင် စား ကြ ပါ တယ် ။ ဒီ တော့ ၊ ပွင့် ပွင့် လင်း လင်း ဘဲ ၊ စာရင်း စစ်
ကို ညှိ လိုက် ပြီး ၊ ကိုင်း ၊ ဘောင် ဝင် အောင် သာ လုပ် ပေး ၊ ဘတ် ဂျက် ရဲ့ ၂ဝ% ပေး မယ်
ပြော လိုက် ရင် ၊ စာ ရင်းစစ် က ဘာ စာ ရင်း မှ တောင်း မကြည့် တော့ ပါဘူး။
သူ တို့ ကို ဘောင် ချာ စာ အုပ် နဲ့ အခွန် တံဆိပ် ခေါင်း သာ ဝယ် ပေး လိုက် တော့ ၊ ကျန် တာ
မလို အပ် တော့ ပါဘူး ၊ စာ ရင်း စစ် တွေ က ဘဲ ၊ သူ့  စာ ရင်း သူ ဆွဲ ၊ သူ ဘာသာ ဆွဲ ထား
တဲ့ ၊ သူ့ စာ ရင်း သူ ပြန် စစ် ပြီး ၊ အား လုံး ကလီယား ၊ ရှိ သမျှ အို ကေ ပေါ့ ဗျာ ၊ ၂ဝ %
အိတ် ထဲ ထည့် ရင်းပြုံး ပြုံး ကြီး ဖြစ် ကုန် ကြ ပါ တယ်။ ဟုတ် ပါ တယ် ၊ တကယ် တော့
စာရင်းစစ် က သူ တကယ် စိုက် ရ တဲ့ ကုန် ကျ စရိတ် က ၊ ဘောင် ချာ အတု တွေ ကို
တံဆိပ်ခေါင်း လိုက် ကပ် ပေး ရ တဲ့ အတွက် ပါးစပ် ထဲ က တံတွေး တွေ ဘဲ ၊
စာ ရင်း စစ် က စိုက် ရ တာပါ ခင် ဗျာ ။ ကျန် တာ က တော့ အိတ် ဝင် သပိတ် ဝင် ပါ။
ကြုံ တုံး လေး ၊ မ ကြာ ခင် ရက် ပိုင်း က ဘဲ ၊ စိုက် ပျိုး ရေး စခန်း တခု ကို စာ ရင်း စစ် ဝင်
သွား တာ ကို ပြော ပြ ချင် လို့ ပါ ၊ အဲ ဒီ စခန်း က တော့ ဘတ် ဂျက် သာ တအား သုံး တာ ၊
ဘာ ရ လဒ် မှ နှစ် တိုင်း မရှိ ပါ ဘူး ၊ စခန်း တာ ဝန် ခံ ဆို အမြဲ မူး နေ ပီး ၊ မယားငယ် က လဲ
၂ ယောက် ယူ ထား ပါ သေး တယ် ၊ ဘာ စာရင်း ဇယား မှ လဲ မရှိ ၊ ထင် တိုင်း သုံး နေ တာပါ။
အဲဒီ စခန်း ကို စာရင်း စစ် ဝင် တော့ ၊ လူ တိုင်း က မှတ် ချက် ချ ပါ တယ် ၊ အင်း ဘယ် လို ဘဲ
ညှိ ညှိ ၊ ပြ သနာ က တော့ ပေါ် တော့ မယ် ပေါ့ ဗျာ ၊ စ ခန်း တာ ဝန် ခံ ကိုယ် တော် ချော
က လည်း ၊ အထက် က ပြော ခဲ့ သလို ၊ လေ ကုန် ခံ ပြီး စာရင်းစစ် ကို ရှင်း ပြ မနေ တော့ ပါ
ဘူး ၊ ထုံး စံ အတိုင်း ၂ဝ % နှုန်း နဲ့ ဘဲ အဆင် ပြေ သွား ပါ တယ်။
နှစ် ရက် လောက် ဘဲ ၊ စာ ရင်း စစ် က အချိန် ယူ ပြီး ၊ သူ့ စာ ရင်း သူ ဆွဲ ၊ အဲ ‘ဒီ စာ ရင်း ကို
သူ ဘဲ ပြန် စစ် လိုက် တာ ၊ အား လုံး စာရင်း ကိုက် ပါ ဘဲ တဲ့ ၊ အို ကေ ပါ တဲ့။
လူတိုင်း အံ့ သြော ပါ တယ် ၊ ဒီလောက် ဗယုတ် သုတ် ခ နိုင် တဲ့ စာ ရင်း ကို ၊ အကိုက် ဆွဲ နိုင်
တယ် ဆို တာ ကို ပါ။ ‘ဒါ နဲ့ စာ ရင်း စစ် ဆွဲ ပေး ထား တဲ့ စာ ရင်း အတု လေး ကို စစ်ကြည့်
ကြ ပါ တယ် ။
အမှန် အို ကေ ပါ တယ် ၊ ကြိုက် သလို စစ် ၊ ဘာ မှ မလွဲ စေ ရ ဘူး ၊ ကြိုက် သလို ပေါင်း
ငါး ပြား တစေ့ စာ ရင်း မကွာ စေ ရ ပါ ဘူး ၊ အား လုံး ကွက် တိ ပါ ခင် ဗျာ ၊ စာ ရင်း စစ် ရဲ့
စာ ရင်း အတု ဆွဲ တဲ့ ပညာ ဟာ ၊ အမှန် လေး စား လောက် ပါတယ်။ မြေ ဧရိယာ ဆို မြေ ပုံ ထဲ
က အတိုင်း ၊ ကုတ်ကို ပင် တွေ တောင် မကျန် ရ ပါ ဘူး ၊ အကုန် လုံး အစိုက် စာ ရင်း ပြ ထား
ပါတယ်။ လယ် ထွန် စက် တွေ ဆို ၊ ဘီး တလုံး ထဲ ကျန် နေ တဲ့ စက် တောင် ၊ စက် အသုံး
အကုန် ပြ ထား ပါ တယ် ၊ နိပ် သ ဟ ပေါ့ ဗျာ ၊ စိုက် ပျိုး တဲ့ အကြိမ် က လဲ တနှစ် ကို သုံးသီး
နေ့ စွဲ တွေ ဘာ တွေ နဲ့ အတိ အကျ ပါ လား ခင် ဗျာ။
ဒါ ပေ မဲ့ ၊ တနေ့ ကို အလုပ် လုပ် တဲ့ စက် မောင်း ချိန် တွေ လိုက် ကြည့် တော့ မှ
ပက် လက် လန် ရ ပါ တယ် ။ စက် တစီး ရဲ့ အလုပ် လုပ် ချိန် ကို တနေ့ ကို ၃၆ နာ ရီ ပြထား
ပါတယ်။ ရက် စက် တယ် ဗျာ ၊ တခြား ဟာ တွေ ကြိုက် သလို လိမ် ပါ။ မရှိ တဲ့ မြေ ဧရိယာ တွေ
အရှိ ပြ ပြီး လိမ် တာ ၊ လိမ် ပါ ဗျာ ၊ မစိုက် တဲ့ အပင် တွေ အစိုက် ပြ ပြီး လိမ် တာ ၊ လိမ် ပါ
ဗျာ ၊ မျက်စိ မှိတ် ပြီး လက် ခံ ပေး လို့ ရ ပါသေး တယ် ၊ တခါ မှ မစိုက်တာ တွေ ကို တနှစ် ၃ ခါ
စိုက် တယ် ဆိုပြီး ဆက် လိမ် ပါဦး ၊
ရှိ ပါစေ တော့ ၊ က မ သကာ ဘဲ လေ ဆို ပီး တော့ ၊ ဖြေ သာ ပါ သေး တယ်။
ဘယ့် နဲ့ ဗျာ ၊ သဘာ ဝ တရား ကြီး ကိုမှ ဆက် လိမ် ပစ် တာ ကို တော့ ၊ စာ ရင်း စစ် ရေ ၊
တ ကယ် ကြေ ကွဲ တယ် ဗျာ ၊ တနေ့ မှာ ၂၄ နာ ရီ ဘဲ ရှိ တယ် ဆို တာ ၊ ကဘာ ဦး အစ က
တဲကပါ ခင် ဗျာ ၊ အဲ သာ ကို ၊ စက် တ စီး တနေ့ ၃၆ နာရီ အလုပ် လုပ် တယ် စာရင်း ပြ ထား
တာ ကို တော့ ၊ ဘယ် လို မှ မခံ စား နိုင် ပါ ခင် ဗျာ ။ တခြား ဟာ တွေ ကို ကြိုက် သလို လိမ်
ပါ။ သ ဘာ ဝ တရား ကို တော့ မ ထိ ပါး ပါ နဲ့ လား ခင် ဗျာ။
ပြော ချင် တာ က ၊ ‘ဒီ က နေ့ လူ တိုင်း ပါး စပ် ဖျား မှာ ငြင်း ခုံ လို့ မဆုံး ဖြစ် ရ တဲ့ လစာ
တိုး မဲ့ ကိတ် စ ပါ ၊ လွှတ်တော် ထဲ က ကိုယ် စား လှယ် တွေ က ၊ လ စာ တိုး ဘို့ လို တဲ့
အကြောင်း ၊ ဘယ် သူ့ အတွက် မှ မ ဟုတ် ကြောင်း ၊ ပြည် သူ့ အတွက် ဖြစ် ကြောင်း ထ ပြော
တဲ့ လူ တွေ က စာ ရင်း ဇယား ကိုင် ပြီး ပြော ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ၊ ကြိုက် တယ် ဗျာ ၊ ဒါ မှ
ငါ တို့ လွှတ် တော် ကွ ၊
အင်း ၊ လက် ရှိ အစိုး ရ ဘက် က လဲ ၊ စာ ရင်း ဇယား ကိုင် ပြီး ပြော ကြ ပြန် တယ်
ဘယ် တုံး က အကြွေး ဘယ် လောက် ရှိ ကြောင်း ၊ လစာ ဘယ် လောက် တိုးရင် ကြွေး ဘယ်
လောက် ထပ် တင် မဲ့ အကြောင်း ၊ ဘာ တွေ ဖြစ် နိုင် ကြောင်း ၊ ဒါကြောင့် မို့ လစာ မတိုး
ပေး သင့် ကြောင်း အခိုင် အမာ ပြော ပြန် ပါ တယ် ၊ သာ ပြီး ကြိုက် သဗျာ ၊ ဒါမှ ဂွဒ် ဂါးဘာမင့်
လက် လွတ် စပါယ် ဘာ မှ မလုပ် ဘူး ၊ ဥပဒေ အတိုင်း လုပ် နေ တယ် ဆို ပ လား။
တနေ့ က ဘဲ လွှတ်တော် ဆရာကြီး က ၊ ဘာ ဖြစ် နေ ဖြစ် နေ ၊ လစာ တိုး ဘို့ မဆုပ် မနစ်
ကြိုး ပမ်း သွား မယ် ဖြစ် ကြောင်း ၊ ဒါ က လဲ သူ ကိုယ် တိုင် သတ်တိ ရှိ လို့ ပြော တာ ဖြစ်
ကြောင်း ၊ သတ်တိ မရှိ တဲ့ သူ က အဂတိ တရား လိုက် စားသူ ဖြစ် ကြောင်း ပါ တဲ့ ခင် ဗျ
ဟိုက် ရှာ လ ဘား ၊ တအား ကို ကြိုက် သွား ပြီး ခင် ဗျာ ၊
အပြော က တော့ ရွှေမန်း ဆို တာ ၊ တအား မှန် နေ ပါ လား ခင် ဗျာ ။
ကျန် တဲ့ နောက် နေ့ လွှတ် တော် ရက် တွေ မှာ တော့ ၊ ဒီ လူ တွေ ဘယ် လို ထပ် ပြော ကြ ဦး
မယ် မသိ ပါ ခင် ဗျာ ၊ ယနေ့ ရွှေ ဈေး က တော့ တ ကျပ်သား ကို ခုနှစ် သိန်း ခွဲ ကျော် သွား ပါ ဘီ။
လော က ကြီး က ထူး ဆန်း ပါ တယ် ခင် ဗျာ။
ပြစ် မျိုး မှဲ့ မတင် ၊ ယမင်း ရွှေစင်လေး ကို ချစ် ခွင့် ကြုံ တဲ့ စ ဦး နေ့ မှာ မှ
အ ရေး ကြီး တဲ့ နေ ရာ မှာ မှ ၊ ပွေး နဲ့ ဝဲ တွေ ဘလပွ မို့ ၊ သက်ပြင်း ချ ခဲ့ ရ တဲ့ သူ တွေ
မ နဲ့ လှ ပါ ခင် ဗျာ ၊ အ မြင် ၊ အကြား နဲ့ က တော့ ၊ ဟုတ် နိုး နိုး ၊ မထင် ကြ ပါ နဲ့ ဗျာ။
လွှတ် တော် ထဲ က ဆရာ တို့ ရေ ၊
အာ ဘောင် ၊ အာ ရင်းသန် ရင် ၊ သန် သ လောက် ၊ ဆက် ဆွေး နွေး ကြ ပါ ခင် ဗျာ။
ကြိုက် သလို ပုံ ဖော် ကြ ပါ ၊ ကြိုက် သ လို ပြော ကြ ပါ ၊ ဟန် ရေး ပြ ကြ ပါ။
‘ဒါပေသိ ၊ ( သ ဘာ ဝ တ ရား ) ကြီး ကို တော့ နဲ နဲ လေး မှ ၊ ထိ ပါး ပွန်း ပဲ့ ခြင်း
မ ရှိ အောင် ၊ ဂ ရု လေး နဲ နဲ စိုက် ပေး ကြ ပါ ပ ဗျား ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/24/20120အကြံပြုခြင်း
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အစားအစာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်သားများသမဂ္ဂ၏ တိုင်ရီ ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများသို့ ပေးပို့သောကြေညာချက်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့က အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင် ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ
Uploaded by MyanmarCelebrity on Feb 21, 2012
Here is the Video of Myanmar Popular Pop Singer Song Oo Hlaing's One Man Show which was held on 17th February 2012 at National Theater, Yangon. Song Oo Hlaing said that he will donate all income of the Show to Free Funeral Service Society, Orphanages and Min Ko Naing's 88 Generation Students' Group for Lu Mhu Yay works. Song Oo Hlaing also wrote on his Facebook that " Its true, i was underahuge pressure!Not from government but from some people who has fear & bad attitudes from our previous Military goverment.The show almost had to cancel,,But at last we madeasuccess."
Burma Day - Celebrating 20th Anniversary of CFOB
တည်းခိုခန်းအခမဲ့..ခရီးစရိတ်အခမဲ့လို့ ကြားပါတယ်..ညွန်ကြားရေးမှုးကိုတင်မောင်ထူးကိုဆက်သွယ်ကြပါ။ကျွန်တော်ပြောတယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ :D
Ottawa (February 24, 2012)
Canadian Friends of Burma (CFOB) is proud to celebrate its 20th anniversary on Wednesday, February 29th, 2012.
The day will begin withapublic seminar jointly hosted by Carleton University & CFOB, with live discussion with Nobel Laureate Aung San Suu Kyi. Students, professors, MPs, NGO’s and members of the Diaspora will havearare opportunity to discuss the current context with the leader of the National League for Democracy (NLD). Members of the media are invited to this event.
Morning event (open to public)
Carleton University, Porter Hall
The day will end with an award ceremony and celebration of CFOB’s 20 years of activities. This event will haveacelebratory and reflective theme as well take time to note the current situation in Burma and the importance of continued engagement on Burma issues.
Special guests will be acknowledged for their contributions toward Canadian policy on Burma. There will beabalance between scheduled presentations and time to ensure people get to mingle and network.
Evening event (RSVP) National Arts Center, Fountain Room
6:30-8:30pm Complimentary hors d’oeuvres
For more info, please contact Melissa Delaney, Event Coordinator at MDelaney@cfob.org <mailto:MDelaney@cfob.org> or 613-869-9211
မန္တလေး စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် လူထုဟောပြောပွဲ နေရာ ရွေးချယ်လျှောက်ထား
by Yangon Press International on Friday, February 24, 2012 at 4:49am ·
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ YPI
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မန္တလေး စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်သွားရောက်သည့်အခါ လူထု ဟောပြောစည်းရုံးရန် နေရာရရှိဖို့ ကြိုးစားလျှက်ရှိရာတွင် ချမ်းမြေ့သာစည်၊ အောင်ပင်လယ် ဆ.ဆ ၉ ရပ်ကွက် ၅၁လမ်းနှင့် အောင်ဇေယျလမ်းထောင့် ရှိ မြေကွက်လပ် နေရာ တစ်နေရာကို မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးမှ တာဝန်ရှိသူများလိုက်လံပြသသဖြင့် မန္တလေးတိုင်း NLD မှသဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီး တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းအန်အယ်လ်ဒီ စည်းရုံးရေး နှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးမျိုးနိုင်က ၀ိုင်ပီအိုင်သို့ ပြောသည်။
ထို့ပြင် ယင်းနေရာကို ခွင့်ပြုရန် အလားအလာများကြောင်းနှင့် ခွင့်ပြု မပြုကို လာမည့် တနင်္လာနေ့တွင် အစောဆုံး သိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုလ ဆန်း ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်နေ့များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးမြို့သို့ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့သော်လည်း လူထုဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်ရန် ဘောလုံးကွင်း ငှားမရသဖြင့် သွားရောက်ရန် ရက်ပိုင်းအလို၌ ခရီးစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
ယင်းနောက် ကချင်ပြည်နယ် နမ္မတီးကျေးရွာ ဘောလုံးကွင်း ခွင့်မပြုကြောင်း သတင်းများ ကြားသိရကာ အန်အလ်လ်ဒီ အောင်နိုင်ရေး တာဝန်ရှိသူများက အန်အယ်လ်ဒီ၏ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များကို အစိုးရ ၀န်ကြီးဋ္ဌာနအချို့က အနှောက်အယှက်ပေးနေကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးသို့ အသိပေး စာတင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ။
တိုင်းရင်းသား ၀တ်စုံများနှင့် တွေ့ရသည့် ကချင်ပြည်နယ်မှ ကျောင်းသား လူထုများ
“ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး မျက်နှာပဲကောင်းချင်တယ်” လှည်းတန်းဗုံးကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရခဲ့သူ မခင်မြတ်နွယ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
by Yangon Press International on Friday, February 24, 2012 at 10:16am ·
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ (YPI)
(ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က လှည်းတန်းလမ်းဆုံ အများသုံး သန့်စင်ခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယင်းသန့်စင်ခန်း ၀န်ထမ်း တဦးသေဆုံးပြီး တဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရရှိသွားသူ မခင်မြတ်နွယ်မှာ ဆေးရုံတွင်လနှင့်ချီ ကုသမှုခံယူလျှက်ရှိသည်။
သူ့အနေဖြင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အတွက်မည်သူ့ကိုမျှ အာဃာတမထားပဲ သူ့၏ မျက်နှာတခြမ်း မှ ဒဏ်ရာကိုသာ ပြန်လည်ကောင်းစေချင်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။ မခင်မြတ်နွယ်နှင့် YPI တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည်ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါသည်။)
လွန်ခဲ့သည့် ၂လကြာက လှည်းတန်း လမ်းဆုံ ဗုံးကွဲမှုကြောင့်ရရှိသည့် ဒဏ်ရာများ ကုသမှုခံယူလျှက်ရှိသည့် မခင်မြတ်နွယ်အား ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ၎င်းနေထိုင်ရာ အိမ်၌ ယခုလိုတွေ့ရသည်။ (ဓါတ်ပုံ- သူရမျိုး YPI)
YPI ။ ။ အဲဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်ကလေးကို ပြန်ပြောပြ ပေးနိုင်မလား။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ၊ သမီးက သိတာ သူထားခဲ့တာဘဲသိတော့တယ်။
YPI ။ ။ ထားခဲ့တဲ့လူပုံကောမှတ်မိလား ။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။ လူပုံကတော့မှတ်မိပါတယ် ။ ပိန်ပိန်သေးသေးလေးကောင်လေးက ။ခပ်ငယ်ငယ်ပါဘဲ။ သူတို့ပြောတာတော့အသက် ၁၅ နှစ်လို့ပြောတယ်။ ကုလားစပ်လို့တော့ ထင်တာဘဲ ထားခဲ့တာ။ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး သူလည်းသူ့ဘာသာသူ အပြင်ထွက်သွားတယ် ။ သမီးတို့လည်း နှစ်ယောက်အတူ ထိုင်ပြီးထမင်းစားနေကြတာ အဲဒီအချိန်မှာထဖြစ်တာ။
YPI။ ။အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ဆေးကုသမှုကို ဘယ်သူ တာဝန်ယူပေးပါသလဲ။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။ အဲဒါတော့ သက်ဆိုင်ရာက ကုပေးတာ ။ ကိုယ်ကတော့ ဘာမှမ၀ယ်ရဘူး ။
YPI။ ။ အလုပ်ရှင်က ရော ဘယ်လိုတာဝန်ယူပေးပါသလဲ။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။အလုပ်ရှင်က ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတော့ ငါးသိန်းလာပေးတယ်။ သုံးဖို့ပေါ့နော် ။ တော်တော်ကြာတော့ လစာအဖြစ်ဆိုပြီးတော့ငါးသောင်းပေးတယ်။ လစာပေးတာတဲ့။
YPI။ ။ အရင်အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလား။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။ သွားတော့မတွေ့ရသေးဘူး။ သူကတော့ပြန်ခိုင်းမယ်ပြောတာဘဲ။ ကိုယ်ကလည်း ဟိုးအရင်တုန်းက ဒီအလုပ်ကိုဘဲလုပ်နေကြဆိုတော့ သူတို့ဆီသွားလျောက်ပြီး လုပ်လိုက်တာ။
YPI ။ ။ အခုစားဝတ်နေရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲ ။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။အခုတော့ အဒေါ်တွေကကြွေးထားတာဘဲ ။မိဘတွေကလည်း အဆင်မပြေလို့ပြန်သွားကြပြီ။ အလုပ်ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်။ ပိုက်ဆံပြန်ရှာကြတာပေါ့ ။ ကိုယ်ကတော့ ဒီမှာအဒေါ်တွေနဲ့ ကြွေးထားတာ စားရတာ။
YPI။ ။ မိသားစု ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲ။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။မိသားစုက အဖေကြီးရယ်အမေကြီးရယ် မောင်လေးတစ်ယောက်ရယ် သမီးရယ် သမီးရဲ့သားလေးရာယ်။ အမျိုးသားက ကွဲနေတယ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အလုပ်လုပ်စားနေရတာ ။ကလေးကို အမေကြီးအိမ်မှာထားတာပေါ့နော်။ မောင်လေး တစ်ယောက်က မြောက်ဥက္ကလာမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။
YPI ။ ။ အခုလို ဗုံးဖောက်ခွဲတဲ့လူတွေအပေါ်ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး ။ ဒါကတော့ ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံပေါ့နော်။ ကုသိုလ်ကံမကောင်းဘူး။သူလည်းတစ်နေ့ကျရင် သူ့ဒုက္ခနဲ့သူ သွားမှာဘဲ။ သူ့လည်းကိုယ်ဘာမှ မလုပ်ချင်ဘူး ။ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံ မကောင်းလို့ပေါ့နော် ။ဟိုဘ၀က ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ပါလာလို့ဖြစ်တာဘဲ။ အဲလိုမျိုးတော့ယူဆတယ်။ ကိုယ်ကမှ ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရအုန်းမယ် ဟိုတစ်ယောက်ဆို သေသွားတာ တစ်စစီဖြစ်သွားတယ် ။ ကိုယ်လည်းပြန်ပြန်ပြီး ဖြေသိမ့်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြစ်မတင်ပါဘူး ။ ကုပေးတဲ့လူကိုတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ အစိုးရကုပေးတယ်ပြောတာပါဘဲ။ ကိုယ်တော့မမြင်ရပါဘူး။ ကိုယ်က ဘာမှမ၀ယ်ရဘူး သူတို့လာလုပ်ပေးတာ အသင့်နေရတာဘဲရှိတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ကုလက်စနဲ့ မျက်နှာလေးပါကောင်းအောင် ကုပေးပါလို့တော့ စာတင်ခိုင်းထားတယ်။ ကုပေးတော့လည်း ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံပေါ့ မကုပေးတော့လည်း ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံပေါ့နော်။
YPI။ ။ နောက်ရောဘာပြောချင်ပါသေးလဲ။
မခင်မြတ်နွယ်။ ။ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး မျက်နှာပဲကောင်းချင်တယ်။ မျက်နှာပြန်ကောင်းချင်တယ်။ အဲဒါ အလုပ်မြန်မြန်ပြန်လုပ်လို့ရအောင် ။ ဒီမျက်နှာနဲ့ ကျတော့ ဘယ်မှမသွားရဲဘူး ။ ယောင်္ကျားးလေး ဆိုရင်တော့ မလုပ်ခိုင်းဘူးပေါ့ ။မိန်းခလေးဖြစ် တော့လည်းရှက်တာပေါ့ လူကြားထဲအလုပ်လုပ်ရမှာလေ။ မကောင်းတာ လုပ်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူး ။ လူတော သူတောထဲမှာ သူများတွေဝိုင်းကြည့်တော့ အားငယ်တာပေါ့ ။ မျက်နှာမကောင်းတာတော့ အဲလိုမျိုးပေါ့နော် ဟိုတစ်လောကဆိုမှန်ထဲကြည့်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ငိုရတယ်။ ခြေထောက်တွေလက်တွေ မကောင်းတာတော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်။ အဲဒါပါပဲ။
YPI ။ ။ အခုလိုဖြေပေးတဲ့အတွက် မခင်မြတ်နွယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
အခင်းဖြစ်ပွားသည့် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့ ဗုံးကွဲပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာ ဒဏ်ရာရရှိသူ မခင်မြတ်နွယ်အား သယ်ဆောင်သွားစဉ်၊ (ဓါတ်ပုံ-YPI)
တိုင်ရီလုပ်သား ပြဿနာ နေပြည်တော် သွားရောက် အရေးဆို
by The Voice Weekly on Friday, February 24, 2012 at 1:09am ·
လုပ်ခလစာနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်သဖြင့် အလုပ်မဆင်းဘဲ နှစ်ပတ်ကျော်ကြာ ဆန္ဒပြလျှက် ရှိသော်လည်း အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်ကြား ညှိနှိုင်းမှု အဆင်မပြေ၍ တိုင်ရီ နိုင်ငံတကာ ဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ၁၈ ဦးနှင့် အလုပ်သမား ရှေ့နေများ နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အသီးသီးတွင် တင်ပြ အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း ယင်း အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသော ရှေ့နေ ဦးဖိုးဖြူက ပြောကြားသည်။
လုပ်ခလစာ ညှိနှိုင်းမှု အဆင်မပြေသည့် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် ၃ ရှိ ရှူးဖိနပ် စက်ရုံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော အရေးကိစ္စကို မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ဝါဏိဇ္ဇ ပဋိပက္ခကော်မတီတွင် ၂/ ၂၀၁၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် လိုက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ တဆင့် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များထံ သွားရောက် အရေးဆိုခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
လက်ရှိ ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော ၁၉၂၉ ခုနှစ် ဝါဏိဇ္ဇ ပဋိပက္ခ အက်ဥပဒေတွင် ပါရှိသည့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းနေသည့် ကာလ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့်ကာလ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးသည့် ကာလတို့တွင် အလုပ်ရှင် အလုပ်မပိတ်ရ၊ အလုပ်သမား သပိတ်မမှောက်ရ ဆိုသည့်အချက်၊ အလုပ်သမားများကို အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ပေးရေး၊ အလုပ်သမား ဥပဒေတွင် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများ ပြဋ္ဌာန်းပေးရေး အချက်များကို အမျိုးသား လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် များတွင် အဆိုပြု တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးဖိုးဖြူက ရှင်းပြသည်။
တစ်ရက်ပုံမှန် အလုပ်ချိန် ရှစ်နာရီအတွက် တစ်နာရီ လုပ်ခလစာ ၁၅၀ ကျပ် ရရှိရမည် ဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုကြေးကို ပုံမှန် အလုပ်ချိန် ရငွေ၏ နှစ်ဆ ရရှိလိုကြောင်း၊ ရက်မှန်ကြေး တစ်လလျှင် ၈၀၀၀ ကျပ် ရလိုပြီး အခြေခံလစာ အနေဖြင့်သာ သတ်မှတ်မည် ဆိုလျှင် အခြေခံ အလုပ်သမား တစ်ဦးကို အခြေခံလစာ အနည်းဆုံး ကျပ်ငွေရှစ်သောင်း သတ်မှတ်ပေး စေလိုကြောင်း၊ တစ်နှစ်ပြည့်လျှင် ဆုကြေးအဖြစ် လက်ရှိ ၅၀၀၀ ကျပ်မှ လစာ တစ်လစာအထိ တိုးပေးရမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းနှုန်းထားများသာ မရရှိပါက အလုပ်မဆင်း နိုင်ကြောင်း တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမား အများစုက တညီတညွှတ်တည်း ပြောကြားကြသည်။
ယင်းသို့ ရရှိရန် စက်ရုံလုပ်သား ၁၈၀၀ ကျော်က ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး လုပ်ခလစာ ပုံမှန်အလုပ်ချိန် တစ်နာရီလျှင် ၇၅ ကျပ် ပေးရာမှ ၁၀၀ ကျပ် အထိ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ ရက်မှန်ကြေးကို ယခင် ၆၀၀၀ ကျပ်မှ ၇၀၀၀ ကျပ်အထိ တိုင်ရီစက်ရုံ လုပ်ငန်းရှင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က နောက်ဆုံး တိုးပေးခဲ့သော သတ်မှတ်ချက်ကို အလုပ်သမား ၆၈၇ ဦး သဘောတူခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသူ ဒေါ်စုစုနွေးက ပြောဆိုသည်။
ယင်းညှိနှိုင်းမှုကို သဘောမတူသော အလုပ်သမား ၁၃၁၁ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဝါဏိဇ္ဇ ပဋိပက္ခ ကော်မတီသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တင်ပြခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားများထံမှ သိရှိရသည်။
" ဒီလလည်း အလုပ်မဆင်းရ။ နောက်လည်းထိ အလုပ်မဆင်းရရင် အဆောင်ဖိုးတွေ စားစရိတ်တွေ မတက်နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ချို့ဆိုရင် အိမ်က ပိုက်ဆံပြန်မှာ သုံးနေရတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် လက်ဝတ်လက်စားတွေ ပေါင်ရောင်း သုံးရတယ်။ အသိတွေဆီကနေ ချေးငှားသုံးကြတာတွေ ရှိတယ် " ဟု ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးမှ လာရောက် လုပ်ကိုင်သော အသက် ၃၀ နှစ် ဝန်းကျင်အရွယ် အမျိုးသမီး အလုပ်သမ တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (ILO) ရုံးမှ ဆက်သွယ်ရေးရုံး ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ဆက်သွယ်ရေး ညှိနှိုင်းအရာရှိများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် ကလေးစစ်သားကိစ္စ၊ အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေခြင်း ကိစ္စများကိုသာ ညှိနှိုင်းရန် နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ် ရေးထိုးထားကြောင်း၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် ILO အနေဖြင့် အလုပ်သမား ကိစ္စများကို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နားလည်မှု လက်မှတ် ရေးထိုးသင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကောင်စီမှ တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံကို ဥပမာထားကာ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
" အနိမ့်ဆုံးလစာ သတ်မှတ်မထားတဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေဟာ အလုပ်ရှင်ရဲ့ သဒ္ဒါကြေး ပေးတာပဲ ရတယ် " ဟု ဦးဖိုးဖြူက ဆိုသည်။
တိုင်ရီ ဖိနပ်စက်ရုံရှေ့မှ ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားများကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက်ခင်းက တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ စတင်ဖွဲ့စည်း
by Burma VJ Media Network on Thursday, February 23, 2012 at 11:14pm ·
By ဇာဏီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခွဲ အချိန်ခန့်မှာ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
" ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုတို့ လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့တွေအားလုံး စုပြီး ဗကသ ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့လိုက်တယ်။ အဲလိုဖွဲ့စည်းရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျနော်တို့ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ခရိုင်လေးဆယ်ကျော်မှ ကျောင်းသားတွေ စုပြီးတော့ တပြည်လုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကျောင်းသား ညီလာခံတခု ကျင်းပမယ်။ အဲကျောင်းသား ညီလာခံကနေမှ ပေါ်ထွက်လာမည့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂတခုနဲ့ ကျောင်းသားတွေအခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီပညာရေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ပေါ်လာဖို့အတွက်ကို ကျနော်တို့ ခရိုင်ကျောင်းသား သမဂ္ဂ တွေကို လိုက်ဖွဲ့စည်းပေးနေတာပါ။" လို့ တောင်ပိုင်း ကျောင်းသား သမဂ္ဂ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဗကသ ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ကိုမင်းသွေးသစ်က ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ် လေးခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်၊ သမဝါယမ တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ အစိုးရ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွေမှ ကျောင်းသားတွေ စုစုပေါင်း ၃၂ ဦး စုပေါင်းပြီး ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာ ဆပ်ကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် မနှင်းသီတာနှင့် ကိုကိုမောင်တို့က ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
" ကျမတို့က ညီလာခံ ကျင်းပရေးအတွက် ညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ အဲလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုလဲ ဗဟို စည်းရုံးကော်မတီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ကျမတို့ ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ ရည်ရွက်ချက်ကတော့ ကျမတို့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်ပါ။ ဗကသရဲ့ မူ(၅)ချက်အတိုင်း ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ရရှိရေး၊ ကျောင်းသားအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စတဲ့အချက်တွေနဲ့ ရရှိဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဖွဲ့စည်းတာပါ။ ကျမတို့ သမဂ္ဂတွေကနေ တိုင်းပြည်အတွက် တထောင့်တနေရာကနေ ပါဝင်သွားမှာပါ။" လို့ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မနှင်းသီတာက ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါတယ်။
" ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖွဲ့ပြီး ဥက္ကဌ မပေါ်ဘူးဆိုတာက ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ ကျနော်တို့ ရှေ့လမှာ ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမှာပါ။ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းတာကို ဗကသ ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီမှ ကိုကျော်ကိုကိုတို့က လာရောက်ကူညီပေးတာကိုလဲ ဝမ်းသာပါတယ်။ နောက်တချက်က ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဆိုပေမယ့် တခြားခရိုင်က ကျောင်းသားတွေနဲ့လဲ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ လို့ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုကိုမောင်က ဘားမားဗီဂျေ မီဒီယာကို ပြောပါတယ်။
စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့နေ့မှာပဲ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ကြေငြာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ခရိုင် လေးဆယ်ကျော်မှာလဲ ခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
Uploaded by BurmaVJMedia on Feb 24, 2012
မြန်မာနိုင်ငံက ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအားလုံးဟာ ပြည်သူတွေ အားလုံးနဲ့ဆိုင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအားလုံးဟာ ပြည်သူတွေ အားလုံးနဲ့ဆိုင်သလို ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာကလည်း ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတွင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်းမှာ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Liverpool 'Myanmar Bando Thaing School'
မြစ်ဆုံ၏ ကျေးဇူးပဲ့တင်သံ အခမ်းအနား
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်းအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ တန်ဖဲရွာ၌ ပြုလုပ်သော ' မြစ်ဆုံ၏ ကျေးဇူးပဲ့တင်သံ ' မိတ်ဆုံစားပွဲ
ဦးအုန်းအား ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ အနီးရှိ တန်ဖဲရွာ၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြစ်ဆုံ၏ ကျေးဇူးပဲ့တင်သံ အခမ်းအနားတွင်တွေ့ရစဉ်
ကိုမင်းကိုနိုင်အား ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ အနီးရှိ တန်ဖဲရွာ၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြစ်ဆုံ၏ ကျေးဇူးပဲ့တင်သံ အခမ်းအနားတွင်တွေ့ရစဉ်
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ အနီးရှိ တန်ဖဲရွာ၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြစ်ဆုံ၏ ကျေးဇူးပဲ့တင်သံ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူများကို တွေ့ရစဉ်
ဆရာအော်ပီကျယ်အား ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံ အနီးရှိ တန်ဖဲရွာ၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြစ်ဆုံ၏ ကျေးဇူးပဲ့တင်သံ အခမ်းအနားတွင်တွေ့ရစဉ်
ကျွန်တော်တို့ ဗမာလို ပြောရင် တစ်ချို့တိုင်းရင်းသားတွေ နားမလည်မှာ စိုးတယ်။ ဘာသာပြန်ရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟိုး အဝေးကြီးက လာပြီးတော့ စကား ပြောတဲ့အခါ ဘာပြောတာမှန်း မသိပဲ ပြန်သွားရင် အများကြီး နစ်နာပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ လာခဲ့တာ ဟိုး မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းက ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို ၈၈ ကျောင်းသားတွေလို့ ...ခေါ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ တုန်းက ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို စခဲ့လို့ အဲဒီလို ခေါ်တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး ဆင်တူ ၀တ်စုံ ကချင်ပုဆိုးလေးတွေ ၀တ်ပြီး စခဲ့တာပါ။ အခုလည်း ကျွန်တော်တို့တွေက ကချင်ဝတ်စုံလေးတွေ ၀တ်ပြီး လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက မိန်းကလေးတွေကအစ ကချင်လို ၀တ်ရတာမှ ပိုလှတယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအ၀င် အားလုံး ရုန်းကန်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ထောင်ထဲမှာပါ။ ဒါ ကချင် ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ၊ ငါတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ခေါင်းပိုင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ခေါင်းကို ထိရင် ရင်ဘတ်ထဲမှာ နာပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ထောင်ထဲက လူတစ်ယောက်က အပြင်က လူတွေလို မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ ထောင်ထဲမှာ မြစ်ဆုံနဲ့ ဧရာဝတီ ရှင်သန်ဖို့ အတွက် သီချင်း ရေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲတာကို သိပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧရာဝတီ ဆက်ပြီး စီးဆင်းရေး မြစ်ဆုံဒေသ အလှတွေ မပျက်ရေး ဒီက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀တွေ မပျောက်ရေး သီချင်းစပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သီချင်းတွေ စပ်ပြီး ဆိုနေတဲ့ အချိန်မှာ ကချင်မှာ ဟောဒီပြည်သူတွေ အောင်ပွဲခံနေတာကို ကြားရတဲ့ အချိန်မှာ ၀မ်းသာရပါတယ်။ - မင်းကိုနိုင် (မြစ်ဆုံ၏ ကျေးဇူးပဲ့တင်သံ အခမ်းအနား၌ ပြောကြားခဲ့သည်များမှ ကောက်နုတ်ချက်)
အမျိုးသမီး သီးသန့်ယဉ်လိုင်းတွေကို အမျိုးသမီးထုက သဘောကျကျေနပ်
Feb 24, 2012 11:27am
ရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ အမျိုးသမီး သီးသန့်ယဉ်လိုင်းတွေကို အမျိုးသမီးထုက သဘောကျကျေနပ်တဲ့ အတွက် တိုးချဲ့ပြေးဆွဲသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုခင်း ဖော်ပြခဲ့သည့်7Day News ကို ထုတ်ဝေခွင့် ရပ်ဆိုင်း
| အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၀၀ နာရီ ၄၄ မိနစ်
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန် ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုခင်းအား သတင်းဆောင်းပါး ဖော်ပြခဲ့မိ၍ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်7Day News Journal အား စာပေစီစစ်ရေးက ထုတ်ဝေခွင့် တပတ်နားလိုက်သည်။
ဆဲဗင်းဒေးနယူးစ် ဂျာနယ် ၏ မတ်လ ၁၃ ရက်ထုတ်၊ အတွဲ ၇၊ အမှတ် ၁ တွင် "တရားခံ ရှာပေးရန် အမိန့်နာခံနေသည့် ဝိညာဉ်လေးဦး" ဆိုသည့် သတင်းဆောင်းပါးကြောင့် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဈေးကွက်ကို ဖြန့်ချီမည့် ဂျာနယ်ကို ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ထုတ်မဲ့ဟာကို ပိတ်လိုက်တာ။" ဟု စာရေးဆရာ သတင်းရပ်ကွက်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
"သတင်းဆောင်းပါးမှာက အသုဘချတဲ့နေ့မှာ ရဲအရာရှိက အလောင်းနားမှာ ပြောနေတဲ့ဟာကို စာထဲမှာကော၊ ဓာတ်ပုံပါ ဖော်ပြထားတယ်။ ကျနော်တို့ ကြားတာကတော့ စီစစ်ရေးက အဲဒီ သတင်းခေါင်းကိုလည်း မပေးဘူး။ သတင်းဓာတ်ပုံကိုလည်း မပေးဘူး။ ဖြုတ်ခိုင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီသတင်းက ဂျာနယ်တခုလုံး အကြမ်းတင်ပြီး နောက်ထပ် ဖြည့်စွက် ရိုက်ပေးဘို့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းနဲ့ ထပ်တင်လိုက်တယ်လို့ ကြားတယ်" ဟုလည်း သူက ထပ်ပြောသည်။
အလားတူ အပတ်စဉ် စနေထုတ် The Voice ဂျာနယ်မှ ယင်း လူသတ်မှုခင်းသတင်းအား မျက်နှာဖုံးသတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံ ဖော်ပြခဲ့သည့် အတွက် စာပေစီစစ်ရေးမှ ခေါ်ယူကာ ခံဝန်ချက် ထိုးခိုင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုခင်းသတင်းအား အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ပြန်လည် ဖော်ပြခွင့်တော့ ပြုခဲ့သည်။
မြန်မာ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အနီး လုံခြုံရေး တင်းကြပ်စွာ ချထားသော ရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တခုတွင် မိသားစုဝင် ၄ ဦးနှင့် အိမ်ဖေါ်တဦး စုစုပေါင်း ၅ ဦး မတ်လ ၃ ရက်နေ့က နေ့ခင်း ကြောင်တောင် ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
စီးပွါးရေးသမား ကုန်သည်ကြီး ဦးချာလီ (ဦးစောကြည်ဖ) ၆ဝ နှစ်၏ ဇနီး ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် (၅၈) နှစ်၊ သမီးများဖြစ်သော ဒေါ်မြစန္ဒာ (၃၆) နှစ်၊ မနှင်းပွင့်အေး (၂၇) နှစ် နှင့် အိမ်ဖေါ် မအယ်ဖော (၁၅) နှစ်တို့ကို ကမာရွတ်မြို့နယ် စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း အမှတ် ၁၂၆ ရှိ နေအိမ်တွင် ခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်၍ သတ်သွားခဲ့သည်။
ကချင်ဝတ်စုံနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၅၃ပုံ) By News and Information Department of NLD
by ဖိုး သိကြား on Friday, February 24, 2012 at 12:24am ·
တို့တိုင်းပြေမှာ ကျွန်းသစ်ရေနံ ပြည့်စုံလျှံလည်း
ဘာကြောင့် တို့တွေ ဆင်းရဲတာလဲ?
တို့တိုင်းပြေမှာ ကျောက်မျက်ရွှေငွေ ချမ်းသာလေလည်း
ဘာကြောင့် တို့တွေ မွဲတေနေလဲ??
တို့တိုင်းပြေမှာ ဆန်ရေစပါး ပေါကြွယ်များလည်း
ဘာကြောင့် တို့တွေ ဒုက္ခဝေလဲ???
မြစ်ချောင်း အင်းအိုင် ရေအရင်းမြစ်တွေ
မြေဆီသြဇာ လယ်ယာမြေတွေ များပြားပေမယ့်
First World စားရင်းဝင်နိုင်ငံအဖြစ်
Third World မှသည် First World ဆီသို့လို့
အလုပ်နဲ့ပါ သက်သေပြခဲ့တာ အားလုံးအသိ
အရင်းအမြစ် ဇီးရိုးဖြစ်တဲ့ စလုံးထံမှာ
ဘယ်သူမွဲမွဲ ငါပဲရပြီးရော သဘောထားပြီး
ပြည်သူတွေ အဆင်ပြေတယ် မထင်ပါနဲ့
ပြည်သူတွေ ချမ်းသာတယ် မမြင်ပါနဲ့
ပြည်သူတွေ ဒုက္ခဝေးတယ် မတွေးပါနဲ့
(ညက ကြည့်လိုက်သော တောင်တွင်းကြီး စာပေဟောပြောပွဲအခွေမှာ ဆရာ မောင်သာချို ဟောပြောချက်ကို နားထောင်ရင်း တွေးမိသော အတွေးအပိုင်းအစတချို့ကို ရေးဖွဲ့ပါသည်..။)
အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားသော... ဖိုးသိကြား(24/02/2012)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/24/20122အကြံပြုခြင်း
အဲ့ဒါတွေ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ၊ မေးပါရစေ၊
ကိုင်း ကားပေါ်မှာလဲ ကားပေါ်မှာမို့လို့ ပြောစရာရှိပါတယ်၊ လမ်းတွေထဲကိုလျှောက်ပြန်တော့လဲမြင်ရတာက အန္တရာယ်မကင်းတာတွေမြင်ရတယ်၊ အဲဒါတွေအားလုံးကြည့်ပြန်တော့လဲ ဘယ်သူ့ကိုပြောရမှာလဲ၊ ဘာရိုက်၊ ညာရိုက်ဆိုတာ ဒို့တိုင်းပြည်မှာဘာမှမရှိသေးတာပါလား၊ နားလည်အောင်ပညာပေးမယ်ဆိုပြန်တော့လဲ ဟိုဟာတင်ရ၊ ဒီဟာတင်ရနဲ့ ဆိုတော့ အရင်အတိုင်း(ထူးအိမ်သင်) ဖြစ်နေပါလားလို့ထင်မိတယ်၊ ကိုင်းအဲ့ဒါတွေ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ၊ အစိုးရလား၊ ပြည်သူလား၊ မေးကြည့်ပါရစေခင်ဗျာ၊
စာရင်းစစ် တွေ ကို ဘယ် ထမင်း ဆိုင် မှာ မှ ထမင်း လို...
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) ရက်နေ့က အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်...
“ ဘာမှမပြောချင်ပါဘူး မျက်နှာပဲကောင်းချင်တယ်” လှည်း...
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ရှက်စရာကောင်းတယ်...
အမျိုးသမီး သီးသန့်ယဉ်လိုင်းတွေကို အမျိုးသမီးထုက...
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုခင်း ဖော်ပြခဲ့သည့်7Day Ne...
ကချင်ဝတ်စုံနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၅၃ပုံ) By News...